Ikpọ Tomato Paste Ndị na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ - China Mkpọ Paste Paste Manufacturers
Hebei Tomato Mmeputa Co., Ltd.
Mkpụrụ Tomato Mkpọ
Sachet Tomato Tapawa
Drum Tomato Tapawa
Ntụ ntụ Tomato
Mkpọ tomato mado 210g
Mkpọ tomato mado 70g (2)
Mkpọ tomato mado 70g
tomato mado 2200g
Tomato mado bụ otu n'ime nri ụbọchị. Ọ nwere ike ịme ka nri dịkwuo ụtọ ma sie ike maka ndị mmadụ. Anyị nwere ike ime dị iche iche dị ka kwa ahịa 'na-arịọ na ahịa mma ọkọlọtọ, na mado bụ nkịtị tomato eke-acha ọbara ọbara na agba, 100% na-enweghị nwekwara, oké na ọ dịghị mmiri. Anyị nwere ike ime GINO mma tomato mado. "Ogo nke mbụ" bụ ụkpụrụ anyị mgbe niile ịhazi ihe mgbochi tomato. Anyị factory ekpuchi ebe ndị 58,740 square mita, ugbu a kwa afọ mmepụta bụ 65,000 tọn, anyị hav ...
Mkpọ tomato mado 400g
Hebei Tomato Industry Co., Ltd. e guzobere kemgbe 2007 na Hebei, China, ngụkọta ego bụ US $ 3.75 nde, nke na-ọkachamara na nhazi nke ụdị nile nke mkpọ Tomato Paste na Sachet Tomato Paste.